Olee otú Hichapụ Videos si iPod
> Resource> iPod> Kachapụ Videos si iPod na Easy
Chọrọ naanị ihichapụ vidiyo si na iPod mgbe idebe ha na iTunes? Ò ị gbagote na ezi echiche iji mezuo ọrụ ahụ? Ọ bụrụ na bụghị ya, m ga-egosi gị ihe dị mfe ma dị mfe otú ahụ.
Ka ihichapụ fim iPod mfe na nanị, ihe mbụ ị ga-eme bụ ibudata a smart-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ, nke nwere ike inyere gị aka iji wepụ iPod fim.
Ebe a na-abịa a smart iPod video iwepụ ngwá ọrụ - Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wonershare TunesGo (Mac). Ọ kpam kpam ike gị ka ihichapụ vidiyo si na iPod emetụ massively na 4 clicks. Obi abụọ adịghị, ọ bụ gị na-akpachi anya na nnyemaaka.
Olee ka ihichapụ fim iPod aka massively
Ugbu a, ka mezue ọrụ na Windows version. Dị ka a Mac onye ọrụ, ị nwere ike kpam kpam na-yiri nzọụkwụ na Mac version.
Nzọụkwụ 1. Wụnye a usoro na jikọọ na iPod aka na PC
Wụnye a iPod video iwepụ ngwá ọrụ na PC gị na mgbe nbudata ya. Na-agba ọsọ ya site abụọ na ịpị Wondershare TunesGo.exe faịlụ na PC gị.
Jiri a USB docking USB jikọọ gị iPod aka gị na PC. Mgbe ha na-njikọ, a iPod video iwepụ ngwá ọrụ ga-chọpụta ya na-egosipụta na ya na isi interface.
Cheta na: Iji jiri TunesGo, ị kwesịrị ibudata iTunes na kọmputa gị wee wụnye ya.
Nzọụkwụ 2. Nhichapụ vidiyo na iPod aka
Na-ekpe ndekọ osisi, niile ọmụma banyere gị iPod aka bụ na ekpe kọlụm. Ihichapu videos na gị iPod aka, ị kwesịrị ị na pịa "Media". Nke a na-ahụ media window ke ziri ezi. Pịa "Movies", nke abụọ na otu na n'elu akara.
Na nkiri management window, gị niile na fim na-depụtara. Họrọ fim ị na-ekpebi wepụ. Mgbe ahụ, pịa "Hichapụ". Mgbe obere window Pop elu, ọ bụrụ na ị na-n'aka na ị chọrọ ka ihichapụ họrọ nkiri na gị iPod aka, ị kwesịrị ị na pịa "Ee". Mgbe ahụ, ndị a na-achọghị na fim na-ehichapụ.
Tupu ị rụchaa ihichapụ na-achọghị fim, ị ga-mma na-gị iPod aka ejikọrọ na gị PC.
Cheta na: TunesGo (Windows) bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile iPods aka, ya bụ, iPod aka 5, iPod aka 4 na iPod aka 3, mgbe Mac version akwado iPod aka 5/4. E wezụga na, ọ bụrụ na gị iPod aka na-agba iOS 4.0 na ala, ị kwesịrị ị nweta nkwalite ka iOS 5.0 na mgbe e mesịrị (The ọhụrụ iOS 9 a gụnyere.).
Mgbe fim e ehichapu, ọ pụtara na ị nwere jisiri ihichapụ videos si gị iPod aka. Ugbu a, nyefee ọkacha mmasị gị music, Podcast na foto, na ọzọ site na kọmputa gị iPod.